မောင်မောင်လတ် ● ‘အကြမ်းဖက်’ စကားလုံးကို အလွဲသုံးစား မလုပ်ပါနဲ့ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒါ့အပြင်၊ အကြမ်းဖက်မှုလို့ ဘာသာပြန်လို့လည်းရနိုင်တဲ့ ….
FBI (Federal Bureau Investigation) က ….
ယူနိုက်တက် ကမ်းဒမ်ရဲ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်ဝါဒ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ (1974 Prevention of Terrorism Act) မှာ အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်ဝါဒကို …
ပါမောက္ခ၊ ရမ်ဒီ ဘိုရမ်က အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်ဝါဒ (terrorism) ကို …. “အယူဝါဒဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူပြုရေးအတွက် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ မဟုတ်သော အရပ် သားများအပေါ် တမင်ရည်ရွယ် ကျူးလွန်သော အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ” -7 လို့ ဆိုပါတယ်။
မိုက်ကယ် ဝေါ်လ်ဇာကတော့ ….
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်ကြောင့် လုပ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု (violence) တနည်းအားဖြင့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှု (terrorism) လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဂျင်ကင် (Jenkin) က ….
– 11 ● Satp.org, ‘Suicide Attacks by the LTTE’
– 12 ● Ibid.
ရဲထွန်း (သီပေါ) – အကြမ်းဖက်သမား တမီးလ်ကျားနဲ့ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး သင်ခန်းစာ